Bhupal Writes - Bhupal Sapkota
नयाँ दिनको शुभकामना ! सुर्य, चन्द्र, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, आकाश सबै चलायमान छन् र त जीवन छ ! सम्पुर्ण चराचर जसले यो मेरो अस्तित्व सम्भब बनाएका छन् ती सबैमा कोटिकोटी नमन् । म यो आजको दिन पनि सदाझैँ मेरा सर्जकमा अर्पण गर्दछु । Thank you for this wonderful day!
पहिलो कुरो, आजको दिन के के गर्नु छ प्रमुख २-३ कामहरु आफुले देख्ने गरी Todo कार्डमा लेखेर राख्नु नत्र झिनामसिना कुरामा अल्झियेर गर्नु पर्ने काम गर्न बिर्सिन सक्छ ।
केही गरि गर्न पर्ने काम गर्न मन लागेन, अल्छी लाग्यो, झिजो लाग्यो, दिक्क लाग्यो, पछिलाइ थाती राख्ने मन भयो भने ५ मिनेट जसरी तसरी त्यो काम गर्न सुरु गरेको जस्तो गर्नु । यसो गर्दा काम को सुरुवात हुन्छ र गर्ने जाँगर लागेर आउँछ । काम सकिनु भन्दा पनि कामको सुरुवात हुनु महत्त्वपूर्ण हुन जान्छ । सुरु नै नभए कसरी progress हुन्छ?
आज के के भयो? के सफल भयो? स-साना सफलताले motivation दिई राक्छ, यस्ता स-साना सफलता हाँसेर, नाचेर, आफुले माया गर्ने ब्यक्ती, आफुलाइ care गर्ने ब्यक्ती संग cherish गर्नु । कोहि नभए लेखेर Victory Log बनायेर राख्नु । सफलताको acknowledgement र celebration जरुरी छ । यसले आफुलाइ आफ्ना काम र कर्तव्यबोध गराइराक्छ अनि मेहनति र disciplined बनीरहन झक्झक्याउछ । यस्तो आदत छैन भने बिस्तारै बानी बसाल्न कोसिस गर्नु । यस्ता १-२ Positive habits हरुले long-term मा जिन्दगीलाइ राम्रो दिशा दिन सक्छन ।
हरेक दिन अनेक मानिसहरुसंग व्यवहार गर्नुपर्ने हुन्छ। बोलीचाली गर्नु पर्ने हुन्छ। आफु bad mood मा भएको बेला खराब बोलि नबोल्नु। mood समय अनुसार परिबर्तन हुन्छ। एकै छिन रमाइलो लागिरहेको हुन्छ, एकै छिन मा नरमाइलो लाग्न सक्छ। कुनै पल खुसिले गदगद भएको हुन्छ भने कुनै पल रिस या पिडामा मन अल्झिरहेको हुनसक्छ। mood परिवर्तनशिल छ तर बोलेको बोलि कहिलेइ फिर्ता हुन सक्दैन। त्यसैले आफ्नो बोलि हर हमेसा मृदुभाषी राख्नु। मिठो बोल्नु, नरम बोल्नु, सबैलाई माया दया बाड्नु। रिस, राग, गालि, गलौज नगर्नु। बोलि छ र त संसार यति रमाइलो छ।
मान्छे ठुलो जन्मिदैन ! केहि न आए केटाकेटीलाइ हेर्नु, सुन्नु उनीहरु जस्तै बेफिक्री हाँस्नु, खेल्नु, कुद्नु, रमाउनु नसके कोसिस गर्नु भन्छन त्यस्तै गर्नु । कुनै चाह छैन, केहि आशा छैन, केहि प्रसङ्ग चाहिदैन मनमा जे आयो निस्फिक्री गरेको छ, जे आयो बोलेको छ, जे मन लायो खेलेको छ, बिनाकारण हाँसेको छ। धेरै आउदैन भन्ने चिन्ता छैन, जानेको छैन भन्ने संकोच छैन। कसैले केहि भन्लान भन्ने डर छैन किनकि त्यहाँ गलत केहि गरिएको छैन। सानो शब्दभण्डार बाट निस्किने शब्दले कसलाई पिरोल्लान र ? सानो परिधी भित्र घुमेका गतिबिधिहरुले कसको टाउको दुखाउलान र? तै, तिनै गतिबिधि रमाइला भइदिने। तै तिनै बोलीले मिठास छरिदिने। सानाले देख्न, बुज्न, सिक्न, गर्न धेरै छ। त्यसैले साना अनुभबहिन प्रति माया दया को भावना राख्नु। त्यसै अनुसारको व्यवहार र बोलि गर्नु। केटाकेटीको माझमा सकिन्छ भने आफु पनि केटाकेटी बन्नु। बाल्यकालका सम्झना फेरी ताजा बनाउनु।
जीवनमा केहि उपहार कसैलाई दिनु छ भने आफ्नो समय दिनु। समय जीवन हो। कसैलाई समय दिनु, आफ्नो attention दिनु भनेको आफ्नो त्यो अमुल्य, नफर्किने समय बाढ्नु हो। कोहि कसैलाई judge नगर्नु, सकिन्छ compliment दिनु, अनुहारमा मुस्कान दिनु, मिठो बोलि दिनु, उनीहरुका सुख,दुख सुनिदिनु, बधाईका ढाप दिनु। सफलताका handshake दिनु। जिन्दगि के छ र ? यिनै सानातिना अनुभबहरु दोहोरिनु न हो ! किन रिसिनु छ र ? कि न रुमल्लिनु छ र ?
पढ्ने बानी र Discovery सोच
जिन्दगि एउटा खोज हो। नयाँ अनुभबको खोज हो। नयाँ सोचको खोज हो। सृजित अनुभब र सोचहरु सबै यहि छन्। बस तिनको discovery महत्वपूर्ण बनिदिन्छ। मान्छेले गर्न बाँकी केहि छैन। सोच्न बाँकी केहि छैन। त्यसो भन्दैमा आफुले गर्ने केहि नभेट्नु या आफुले सोच्न सकिएन भन्नु कत्तिको जायज होला ? यो खोजी को process मा हरेक दिन केहि नयाँ पढ्नु। जीवन अझ मनोरम बनाउन के गर्न सकिन्छ हर समय कोसिस गर्नु। कोसिस गर्ने न हो। यो खोज दैनिकी बनोस। पढ्ने बानि दैनिकी बनोस।
केहि कुरा पुरानो या नयाँ सिक्न होस् या आफुले जानेको कुरामा expertise प्राप्त गर्न होस् practice जरुरि छ।Practice, practice, practice यसको बिकल्प छैन। आफुले already जानेको कुरो फेरी फेरी दोहोर्याएर गरिराख्नु लाई मात्रले practice र learning/पढाई सफल हुदैन। धेरै जसो यस्तो हुन्छ कि दैनिकी एकोहोरो बनिदिन्छ अनि हरेक दिन उही प्रकृतिका क्रियाकलाप र काम गर्दा गर्दै दिन सकिएको पत्तो हुदैन। त्यस्तो भयो भने experience gain होला तर expertise develop हुदैन। सो, Practice गर्दा आफुलाई challenge गर्नु जरुरि छ। Practice को लागि आफ्नो क्षमता भन्दा थोरै माथिको कुरो गर्न प्रयत्न गर्नु, आफ्नो performance analyze गर्नु अनि mistakes हरु केहि भेटिए त्यसलाई सुधार गर्नु। यो process दोहोर्याउनु। फेरी practice गर्नु अनि त्यसपछि फेरी गर्नु। Practice deliberately गर्नु नकि यत्तिकै बहकिएर। Self improvement deliberate practice को परिणाम हो। पढाई, खोजाई, बुझाई, discovery तब अर्थपूर्ण हुन्छ जब त्यसले deliberate practice भेट्छ। यो दैनिकी बनोस। दिनको केहि समय आफ्नो skills र craft improve गर्न deliberately practice गर्नु।
दैनिकीका केहि कामहरुमा आफु best हुनु, बन्नु। अनि केहि काम कुरा हरुमा आफु worst performer हुनु। आफु best र expert भएर कार्य गर्दा कामहरु आफुले lead गर्न सकिन्छ, अनि अरुलाई आफ्ना सोचाई र गराईले प्रेरणा दिन सकिन्छ। जब आफु worst performer भईन्छ तब अरु जान्ने र expert हरु बाट सिक्न पाइन्छ।
जमाना प्रबिधिको छ। नजानेका कुरा सिक्न अनि जानेकाकुरा सिकाउन कहिँ टाडा गई राख्नु पर्दैन। जसरि नजानेका कुरा सोधेर, खोजेर, गरेर, परेर सिकिन्छ त्यसै गरि आफुले जानेका कुरा, आफ्ना सोच विचार, आफ्ना भावना दैनिक जसो share गर्दै जानु। भनेर सकिन्छ भन्नु, लेखेर सकिन्छ लेख्नु, चित्र कोरेर सकिन्छ कोर्नु, सुर-तालमा नाचेर सकिन्छ नाच्नु, संगीत सर्जेर सकिन्छ संगीत बनाउनु। सृजना गर्नु। आफुले सिक्न सकिने छ भने सिक्नु। चलायमान संसारमा यसले गति थप्छ। सोच विचारको मन्थन हुन्छ। केथा देवताले अमृत यसरि नै मन्थन गरेका पो हुन् कि ?
कर्म गर्ने प्राणी हामि। यहाँ प्रयास जरुरि छ। कोसिस जरुरि छ। तर त्यो संगै आफुले गरेको के मिल्यो के मिलेन। कति सहि भयो कति सहि भएँ। कति सफल भयो के असफल भयो। लेखा-जोखा र गणित पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ। त्यसैले हप्तामा एक दिन, शनिबार या आइतबार छुट्टीको दिन परेर आफ्ना गतिविधिहरुको लेखा-जोखा गर्नु। सफल भयो त कसरि सफल भयो, किन सफल भयो, कसले गर्दा सफल भयो खोजि गर्नु। आफुलाई सघाउने हरुलाई धन्यवाद दिनु।
आफुले यो लेख अन्तिम पल्ट पढेको दिन:
Posted By: @bhu1st On 2:07:00 PM In दैनिकी
शङ्ख र स्याल
बुवा आमाको ५० औं बर्षगाँठ्को अवसर पारेर काठमाडौँको धुलोमैलो बाट केहि दिन विश्राम लिन म यो हप्ता चितवन छु । आफू हुर्केको ठाँउ, धुलो कम, धुवाँ कम, हो-हल्ला कम आनन्द लाग्छ ।
मलाई यो सन्सारमा म जति कोहि सुत्दैन होला जस्तो लाग्छ । सधैं राती ८ बजे सुतेर बिहान ८ बजे उठ्ने प्राणी म आज के भयो कुन्नी पौने पाँच बजे मेरो आँखा खुल्यो । माइलो दाजिले राती बिउँझेको बेला घडी हेर्यो भने निद्रा लाग्दैन मनमा कुरा खेलीराक्छ भन्नू हुन्थ्यो एकछिन त्यही कुरा सम्झेर घडी तिर आँखा लगाइन तर मनले मानेन अनि घडी हेरेको ठ्याक्कै पाँच बजेको रहेछ ।
छानो हेरेर टोलाईरहेको थियेँ एक्कासी पुँहु, पुँ गरेर बडा मजाको शङ्ख फुकेको आवाज अलि पर छिमेकको कुनै घर बाट आयो । यो शङ्ख पनि बडा मजाको चिज छ यार । करिबन दुई-तीन मिनेट को शङ्खको आवाज पछि त्यो रोकियो । एकछिन आफू हिन्दु परिवारमा जन्मेर हुर्केकोमा गर्व महसुस भैरह्यो । आफू यस्तो संस्कारी छर छिमेक मा बस्ने अहोभाग्य लियेर आईयेको रहेछ । शङ्ख बज्नु, घण्टी बज्नु भगवानका आरति गुन्जनु एउटा दैविक र आध्यात्मिक माहोल दैनिक एक घन्टा बन्नु सानो कुरा हैन जस्तो लाग्छ । आफ्नो संस्कार, परम्परा, रितिरिवाज यसरी दैनिकी बन्दै गुन्जीरहेको सुन्दा मन आनन्दित हुन्छ ।
जमाना फेस्बूक र टुइटरको छ । बिहान सबेरै उठेर हग्न जानू पुर्व सर्सर्ती फेस्बुक र टुइटरमा स्क्रोल गरियेन भने पाद मात्रै आउँछ । सात बजेतिर आलाराम बजायेर जबर्जस्ति उठ्यो, चिया नास्ता गर्यो, येसो टाइम्लाइन चिहायो, खाना खायो, अफिस तिर हान्नियो, कतिबेला पाँच या छ बज्ला भनेर कुर्यो अनि घर फर्कियो । यस्तो हतास र मोडर्न सैलिको दैनिकीले भरिएको अनुभवहरु माज शङ्खको ध्वनीको गुँजले बडा अनौठो अनुभुति दियो आज ।
म अझै छानै हेर्दै थिएँ । यसो भित्ताको घडी तिर आँखा गयो, साडे पाँच बजेछ । अचानक कुहिँया, कु... कुहिँया, कु, को को गर्दै एकहुल स्याल कराए । हाम्रो छिमेकमा भाले कम स्याल ज्यादा छ्न जस्तो लाग्छ । घरबाट ५०० मिटर जति दुरिमा स्यानो खरबारी (जंगल) छ । केहि सालका रुख, बाँस अनि खर । त्यहाँ दुई तीन हुल स्यालले यो एरियामा बस्ती बसेदेखी डेरा जमाएकाछन् । स्यानो छँदा मेरो गुड मर्निङ र गुड नाइट यिनै स्याल बासे पछि हुने गर्थ्यो । बिसौँ बर्ष देखि सुन्दै आएको आवज आजकल खासै बिझाउन्न । एकछिन कराउछन्, रोकिन्छन् । बिचरा जन्तु न परे ।
यो टोलका बासीहरु स्याल कराउनु सङ्ग बानी परिसके । तर कसैले मलाई तेरो गाउँको एउटा मन नपर्ने कुरो सुना भनेर कसैले सोध्यो भने यहि स्याल कराउनु एक नम्बरमा पर्छ । यतिका बर्ष बिताईयो तैपनि झल्यास्स मनमा यस्तो स्याल कराउने ठाउँमा पनि कोहि बस्छ भनेजस्तो हुन्छ ।
यो उमेर अचम्मको हुँदो रैछ । सबै कुरा उमेर कै खेल हो जस्तो लाग्न थालेको छ आजकल । जन्मियो, हुर्कियो, १५-२० को हुँदा सम्म स्कुल गैयो । स्कुल पछि क्याम्पस । क्याम्पस पछि जागिर । जागिर पछि बिहे । बिहे पछि छोराछोरी, परिवार । परिवार पछी घरजम । अहिले तीस काटेर यसो गमेर हेर्दा अब घरजम गर्ने उमेर भयो कि भन्ने भान हुन्छ । खयर भोग्न, देख्न धेरै बाँकी छ । हाललाई यहि घरजमको कुरा गरौँ ।
म आजकल यो घरजमको बिसयलाइ लिएर बडा दोधारमा छु । ल घरजम त गर्ने तर कता गर्ने ? आफू हुर्केको बढेको ठाँउ भर्सेस् आफू पढेको, जागिरमा जमेको ठाउँ । काम धाम सबै छाडेर काठमाडौ छाडेर कुम्ब्लो बोकि चितवन मै पो बस्ने कि? मेरो उमेर थेउरीले फेरि झकझक्याँउछ । हैन गर्ने बेला, गरिखाने बेला आफ्नो कर्म थलो छाडेर कहाँ अन्त बस्नु?
४७ सालमा बाग्लुङको दमेक बाट चितवन आँउदा म ४ बर्षको थिएँ । त्यो बालापन त सबै सम्झन्न तर आफू सम्झिन सक्ने भयेपछीका दिन सम्झिदा यो ठाउँ एउटा सानो २०-३० फराकिलो गरि ठडिएका १-२ इटाले बनेका अरु खर या जस्तापाताका घरहरुको झुन्ड थियो । हामी ८-१० जना केटाकेटीको समुह । साथीहरू माझ खेल, कुद, हाँसो, रुवाइ सबै थियो । गाउँ भरिमा एउटा स्कुल । हामी त्यहीँ पढ्ने । हरेक घरमा भैंसी,गाइ, बाख्रा पाठा । पुग्दो दूध, घिउ । हरेक घरको आफ्नो करेसाबारी । तरकारी किन्नु नपर्ने । नुन र चिनी साबुन किने पुग्ने । तेल आफ्नै बारिको तोरि पेलेर पुग्ने । भात आफ्नै खेतको धानले पुग्ने । आटो पिठो आफ्नै बारिको गहुँ र मकैले पुग्ने । रमाइलो चाहियो ५-६ घर का बुढा पाका जमेर ट्वान्टी-नाइन र दहर मारा खेलेको हेरे पुग्ने । हरेक घर आफैमा पुर्ण लाग्ने । हरेकको जग्गा जमिन प्रसस्त थियो, घरमा कामको खाँचो कहिले थिएन । भोक थिएन, रोग थिएन । पढाई-लेखाई तिर बिस्तारै गाउँले हरुको चाख बस्दै थियो । पढे लेखेका मान्छे भेट्न गारै थियो । खेती किशानी मै मान्छे हरुको दैनिकी सुरु हुन्थ्यो र सकिन्थ्यो । एकमन लाघ्छ, यो पो हो त मैले घरजम गर्न खोजेको दैनिकी । फेरि अर्कोतिर लाग्छ, धत् जमना कहाँ खेतीपाती को रह्यो त? तर बिगत सम्झेर कहिले पो के पो भएको थियो र आज हुन्छ ?
आजकल शरदपुर सिमेन्टका घरहरुले भरिएको छ । यहाँ खाली जग्गा कमै छ । आजकल यहाँ करेसाबारी छैनन । धारे चोकको तरकारी पसलमा ताजा ताजा फलफुल तरकारी पाइन्छ । या ठेलामा भैया आउँछ, आमै तरकारी चाहियो कराउँदै । यहाँ आजकल खेत छन खेतमा काम गर्ने किशान छैनन । यहाँको खरबारीका रुखका पात हल्लिदा आजकल जापान, अस्ट्रेलिया, पोर्चुगल, अमेरिका तिरको हावा आउँछ । यहाँका स्यालहरु आजकल कराउने हैन रुन्छन जस्तो लाग्छ ।
बाटो घाटो चिल्लो पिच बनेको छ । एक घर दुई पसल को नारा जिबन्त देखिन्छ । एक घर बाट एक जना बिदेश नगएको घर छैन । हुर्केका दौँतरी कहाँ कता छ्न तिनका फेसबुकका फोटा चाहिँ देख्न पाइन्छ । बुढा-पाका स्याहार नपाएर घरमै लडिरहेका छन । केटाकेटी मोबाइलका फोटा र भिडियोमा रुमलिएका छन । न त यहाँ खेल्ने बारि बाँकी छ । न त खेल्ने चाह नै । र फेरि लाग्छ, के यो हो त चितवन मैले घरजम गर्न खोजेको?
काठमाडौ ट्रली बस चल्ने समय देखि हालसम्म मेरो पढ्ने र कर्म गर्ने थलो बनेको छ । तर यो बिशौँ बर्षमा साएदै कमै दिन होलान काठमाडौमा मेरो मन जमेको । मलाई भिडभाड मन पर्दैन, मान्छेहरुको हुल मन पर्दैन । मलाइ मसिन र गाडिहरुको कोलाहल मन पर्दैन । मलाई यसो फुर्सदमा टोलाउन नपाउने दैनिकी मन पर्दैन । काठमाडौंमा त्यस्तो केही छैन जो मन परोस सिवाए आफ्नो काम । काठमाडौंको बयान म एउटा जिब्रो भएको प्रा‍णीले कसरी गरि सकुँला र ।
धेरै ठुलो, नौलो चाह हैन, सामान्य हो । यस्तो होस, बिहान भाले बासेसी निद्रा खुलोस । उठेर सुर्य नमन् गरेर जप-तप गरेसी पार तापेर बस्न पाइयोस । यसो खाना खाइ ओरि होम अफिस तिर अल्झिइयोस । अल्छी लागेर छत तिर निस्के हरियाली दृश्य देख्न पाइयोस् । अफिसको काम सकेसी निस्केर करेसाबारिमा बोट बिरुवासङ्ग खेल्न पाइयोस । भौं, भौं र क्वाँ, क्वाँ गरि भुक्ने र रुने कुकुरहरुको तान्डब सुनेर रातमा बिउझनु नपरोस् । यसो फुर्सद पाए गफमा रमिने दुई-चार छिमेकी हुन् । यत्ति हो चाह !
खएर, लेखेर, भनेर हुने हैन । बिवाह हुन र घर जग्गा जोडिन जुर्नु पर्छ रे अब कहिले जुर्ने हो त्यसैको पर्खाइमा छु । मेरा पाठक कोहि मलाई छिमेकी बनाउन मन छ भने कमेन्टमा लेख्नु होला ।
८ बज्यो अब उठ्ने मेसो गर्न पर्यो । आज शुक्रबार कामको लोड बढी नै छ । लौ त शुभ दिन ।
Posted By: @bhu1st On 3:13:00 PM In काठमाडौँ , चितवन , दैनिकी
Nepali Pasa game rules
पासा खेल दशैंँ तिहारमा साथीभाई परिवार जन बिच खेलिने रमाइलो खेल हो । धेरै पैसा हानेर जुवाको रुपमा खेल्दा यो खेलमा हार्नेले घर घडेरी गुमाउनु परेका कथा सुन्न पाइन्छ । यो खेल केबल मनोरञ्जनको लागी खेल्दा ठिक हुन्छ । चलन चल्तिका नियम यस प्रकार छन:
-3game pieces,3टा पासा
- 1, 2, 5,6ko butta
- 13,15,17,18 khane dau (paro/परो) -4dau
- 3,4,6,9 tirne dau (tiro/तिरो) -4dau
- 5,7,8,10,11,12,14, 16 - bachyo / बच्यो - 8 dau
- 15 ko khane dau ma bot collection for pasa owner
- euta 5, euta 1 pare sure bachyo
- tinta2halhale / हल्हले ६
- 6, 6, 1 - tike 13 paro / टिके तेह्र
Posted By: @bhu1st On 6:19:00 PM In